Vivo X20 Plus UD ကိုချွန်ထက်တဲ့အရာနဲ့ခြစ်၊ မီးအပူပေး၊ ကွေးပြီးအားနဲ့ချိုး အစရှိတဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေပြုလုပ်ပြီးသောအခါ – AsiaApps
Under-display Fingerprint feature ပါဝင်တဲ့ Vivo X20 Plus ဟာတော့ဇန်နဝါရီလအကုန်ပိုင်းလောက်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Fingerprint ဟာ ဖုန်းရဲ့ display အောက်မှာရှိနေတာကြောင့် ထူးခြားပြီး ကိုင်ရတာဆန်းသစ်လှတဲ့ဖုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဟာကြည့်လို့ကောင်းပြီး ကိုင်တွယ်ရတာအဆင်ပြေပေမယ့် JerryRigEverything youTube channel က Zack ဆိုသူဟာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဖုန်းရဲ့ Hardware ပိုင်းခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာကိုသိရှိဖို့ ချွန်ထက်တဲ့အရာနဲ့ခြစ်၊ မီးအပူပေး၊ ကွေးပြီးအားနဲ့ချိုး အစရှိတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကို မနေ့ကပဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၆ မိနစ် ၅၅ စက္ကန့်!
Zack အနေနဲ့ Vivo X20 Plus UD မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ Fingerprint ကို အနည်းငယ်ချွန်ထက်တဲ့အရာနဲ့ အစင်းရာထင်ရောင်ခြစ် ခဲ့ပါတယ်။ အစင်းရာထင်နေပေမယ့်လည်း ဖုန်းရဲ့ Display အောက်မှာရှိနေတဲ့ Fingerprint system ဟာပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နေဆဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အရမ်းချွန်ထက်တဲ့အရာကိုအားအများကြီးသုံးပြီး Fingerprint ကိုခြစ်လိုက်ရင်တော့ သက်ရောက်မှု Damage ကအရမ်းများပြီး ဖုန်းပါ ကြွသွားပါတယ် (အိမ်မှာမစမ်းကြပါနဲ့ ?)။
ဆက်လက်ပြီး ဖုန်းကိုကွေး၊ မီးအပူပေး အစရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ Hardware ပိုင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့ရာ အားလုံးမှာအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ မီးအပူပေးရာမှာတော့ ၃၀ စက္ကန့်ကြာမြင့်မှ Damage စတင်သက်ရောက်တာပါ။ Damage ဆိုပေမယ့် Vivo ရဲ့ OLED display ကြောင့် အဖြူရောင်အကွက်လေးထင်သွားရုံပါပဲ။ ကျန်တာတွေအားလုံးကပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ စမ်းသပ်မှုရလဒ်အားလုံးကို ခြုံကြည့်ရင် Vivo X20 Plus UD ဟာ Zack ရဲ့ Hardware စမ်းသပ်မှုအပိုင်းမှာ အောင်အောင်မြင်မြင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
Android, Testing, Vivo